ချိဖတွေကို ရင်မခုန်တော့တဲ့ ဂြိုလ်သူမဖြစ်နေပြီလား? | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး ချိဖတွေကို ရင်မခုန်တော့တဲ့ ဂြိုလ်သူမဖြစ်နေပြီလား?
လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေရှိတဲ့ လောကကြီးမှာ လူတိုင်းက သူ့ခံယူချက်နဲ့သူ ရှင်သန်နေတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ မတူညီတဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေ၊ မတူညီတဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ စသဖြင့် ဒီလို မတူညီတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံယူချက်တွေပါပဲ။
လူအဖွဲ့အစည်းမှာ အတွေ့များတာ တစ်ခုက သမားရိုးကျ လိင်ကွဲကိုပဲ နှစ်သက်တဲ့ လူတွေဆိုပေမယ့် ဇာတ်တူသားပဲ စားချင်ကြတဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေကလဲ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
ခုခေတ်မှာ လိင်တူချစ်သူတွေအဖို့ ဒီခံစားချက်တွေကို ဖွင့်ပြောပြဖို့ အခက်အခဲတွေအပြင် တချို့ မြီးကောင်ပေါက်လူငယ်တွေဆိုရင် ဒီလိုမျိုး အများနဲ့မတူတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်က သူတို့မှာရှိနေမှန်းတောင် သတိမထားမိတာမျိုးတွေတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ခုတစ်ခေါက်မှာ သိလိုရာမေးကနေ ဘီးကျဲတွေကို ရှောင်ကာကွင်းလို့ စကီတွေကိုပဲ ဆွဲစားဖို့ တွေးနေမိပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မသေချာ မရေရာတဲ့ ချိမတွေအတွက် လိင်တူ မိန်းကလေးချစ်သူတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
လက္ခဏာ (၁) လိင်တူစကီတွေနဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှု ရှိနေတာ
ဉပမာ ကိုယ်က သူစိမ်းတွေပဲ ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောကျာ်းလေးတွေထက် မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်လွယ်တာမျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်ဘေးနားမှာ ယောကျာ်းလေးတွေ ဝိုင်းနေပေမယ့်လဲ မိန်းကလေးတွေနဲ့ပဲ တရင်းတနှီးနေတတ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် အချိန်တော်တော်များများ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ တွေးနေတတ်တာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အကြောင်းပဲ ဆိုရင်တော့ ချိမအနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆန်းစစ်ကြည့်သင့်နေပါပြီ…
လက္ခဏာ (၂) လိင်တူဇာတ်လမ်းတွေကို နက်နက်နဲနဲ ဖီးလ်တာ…
လူတော်တော်များများက လိင်တူချစ်ကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ၊ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ဖူးကြပေမယ့် အများစုကတော့ နက်နက်နဲနဲ သိပ်မရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်က အဲ့လိုလူမျိုးတွေနဲ့မတူ တမူထူးခြားစွာနဲ့ပဲ ဒီလို လိင်တူဇာတ်လမ်းတွေ၊ စာအုပ်တွေ ဖတ်မိတိုင်း နက်နက်နဲနဲ ခံစားရတာ၊ ဇာတ်ကောင်တွေနေရာမှာ “ငါသာဆိုရင်” ဆိုပြီး လိုက်ခံစားပြီး စိတ်ကူးယဉ်နေတာမျိုးတွေရှိနေတတ်ရင် လိင်တူချစ်သူဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။
လက္ခဏာ (၃) ဘီးကျဲတွေထက် ဆော်အလန်းလေးတွေကို ငမ်းတာ…
ဒီလက္ခဏာကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ချိမအနေနဲ့ လှလှပပ ဆော်အလန်းလေးတွေကို မျက်စိထွက်ကျမတတ် ငမ်းပြီး ရုပ်ဖြောင့် ဗလတောင့်တဲ့ ဘဲချောချောတွေကို ဝေဝါးဝါးပဲ မြင်နေမယ်။ ဒါ့အပြင် အင်္ကျီမပါ ဗလာကိုယ်ထည် Six Pack နဲ့ ယောကျာ်းလေးတွေကို မြင်ရင် ဘာမှမခံစားရပေမယ့် ဘော်ဒီလှလှနဲ့ အကိတ် ကောင်မလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ရင်တွေတုန်၊ မဟုတ်မဟတ်တွေ တွေးနေတဲ့ လက္ခဏာဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိသူဆိုရင်တော့ ဇာတ်တူသား စားချင်နေတဲ့ ချိမ ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေပါပြီ။
လက္ခဏာ (၄) လိင်တူချစ်သူလား ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းထုတ်လေ့ရှိနေတာ…
ချိမအနေနဲ့ အပေါ်က လက္ခဏာ (၃) မျိုးထဲက တစ်မျိုး မဟုတ် တစ်မျိုးကို ခံစားနေရတဲ့အတွက် “ငါ လက်စ်ဘီးယန်းများ ဖြစ်နေပြီလား” ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးခွန်းထုတ်နေမယ်၊ သံသယတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ လိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်ဆိုတာ သေချာသလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သမားရိုးကျ လိင်ကွဲကိုပဲ သဘောကျတတ်ကြတဲ့ လူတွေက ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် “လိင်တူချစ်သူ ဟုတ်လား? မဟုတ်ဘူးလား?” ဆိုပြီး မေးခွန်းမထုတ်တတ်ကြလို့ပါပဲ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက ကိုယ့်မှာ ဒီလို လိင်တူချင်း စိတ်ဝင်စားတဲ့ လက္ခဏာတွေ ရှိနေခဲ့ရင်လဲ အားမငယ်ပါနဲ့… စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့… လူအများစုရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်တွေက ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက တည်ရှိလာကြတာများပြီး အသက်အရွယ် တစ်ခုရောက်လို့ ပြောင်းလဲသွားတာကတော့ ရှားပါတယ်။ ဒီတော့ မွေးဗီဇအနေနဲ့ ပါလာတဲ့ ခံယူချက်ဆိုရင်တော့ ဖျောက်ဖျက်လို့လဲ မရနိုင်သလို ပြောင်းလဲလို့လဲ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုယ်သာလျှင် ကိုယ့်ဘဝကို ပိုင်သူမို့လို့ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုကို တန်ဖိုးထားလိုက်ရအောင်လား ခင်ဗျာ…